Kumanikidza kuvhara kuvhara application muWatchOS 4 | IPhone nhau
Kumanikidza kuvhara kwechikumbiro paApple Watch kana kuiuraya yakanangana nemabhatani eApple Watch zvinogoneka. Kuti tiite izvi isu tinongofanira kutevera maviri akareruka matanho asi izvo cpakuuya kweshanduro nyowani yeanoshanda system watcOS 4 ndachinja zvishoma.
Izvo zvinokwanisika kuti vazhinji veavo varipo vagara vatoziva nezve mukana uyu wekuvhara maficha paApple Watch, asi kune avo vashandisi vasingazive zvekuita kana vasangana nedambudziko mune chero chikumbiro uye unoshuva kuipwanya yakavharwa, iyi ndiyo nzira yekuenderera.
1 Maitiro ekumanikidza ekuvhara maapplication muWatchOS 4
2 Mune shanduro dzekare dzeWatchOS 4
Maitiro ekumanikidza ekuvhara maapplication muWatchOS 4
Fungidzira kuti isu tinopinda chikumbiro uye chero chikonzero chatinoda kumanikidza kuvhara. Mune ino kesi isu tinongofanirwa kuita zviito zviviri nemabhatani epanyama eApple Watch uye nenzira iyi kukwanisa kuvhara chero chirongwa chatakavhura, saka chinhu chekutanga hachisi chekubata chero bhatani apo application irikumhanya uye:
Dhinda uye ubatise bhatani repadivi rewatch kusvikira menyu yekudzima Apple Watch yaonekwa. Kana zvikaonekwa tinosunungura bhatani
Iye zvino izvo zvatinofanirwa kuita kubata pasi korona yedhijitari kudzamara application yavhara uye ndizvozvo.
Nenhanho mbiri idzi dzakareruka tichakwanisa kutangidza maficha ari "kuturika" kana kuti isu tinongoda kuvhara pasina kusiya iyo application yakavhurika kumashure.
Mune shanduro dzekare dzeWatchOS 4
Mukutaura haufanirwe kunge uri mune dzakapfuura shanduro, asi kana iri kesi yako, unogona kuita maitiro akafanana ekuvhara zvikumbiro asi nematanho akasiyana. Zvese zvatinofanirwa kuita kuita tinya bhatani kusvikira iyo bvisa Apple Watch wobva wadzvanya bhatani rakafanana zvakare, uchiramba wakadzvanya kudzamara app yavharwa.
Izvo zvakakoshawo kuti uzive izvo zvinokurudzirwa kuti usavhare zvinoshandiswa paApple Watch kuitira kuti vavhure nekukurumidza uye ndeyekuti iyo inoshanda sisitimu pachayo yakagadziridzwa pairi, saka kuvhara iwo mafomu hakuna kudikanwa kunze kwekunge iine mhosva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekumanikidza kuvhara programu muWatchOS 4
Sekuziva kwangu, mushanduro dzakapfuura zvakaitwa zvakafanana nematauriro aunoita izvozvi. Zvirinani, ndagara ndichizviita nenzira iyi muWatchOS 2 na3.
Apple Bhadhara Cash yave kuwanikwa muUnited States